Sida lagu Helo Album Art for All Songs Your
> Resource > Music > Sida lagu Helo Album farshaxanka for Your Music Library
Haddii aad leedahay maktabad music weyn, waxaa laga yaabaa in aad ku kici qaar ka mid ah waqtiga si aad u wanaagsan u maareeyaan. Marka la eego in aad heshay dhammaan macluumaadka mid kasta hees, gaar ahaan album farshaxanka, waxaa laga yaabaa inay noqdaan fudud. Laakiin halkan waa dhibaato, qaar badan oo ka mid ah heesaha laga yaabaa in ay ka maqan tahay album. Maxaad qaban kartaa? Halkan waa xal fiican oo sahlan si wax looga qabto dhibaatadan. Wondershare TidyMyMusic u Mac si toos ah ka heli kartaa waxaad tahay album u maktabadda music aad Dufcaddii. Sidaas aadan u baahan tahay in la song mid kasta oo ka mid ah qaban. Download barnaamijkan si loo soo dajiyo on your computer ka dibna aan loo hubiyo sida loo isticmaalo hoos ku qoran.
1 dar maktabadda music aad
Burcad barnaamijka iyo heesaha oo dhan maktabadda Lugood aad loo dari doonaa si toos ah iyo soo bandhigay hoos nidaamsan Lugood.
Haddii aad isticmaasho barnaamijkan oo aad music deegaanka, waxaad tagi kartaa Music nidaamsan si guji Open File ama si toos ah jiidi file music ama folder barnaamijka.
2 Hel tahay album aad heeso
Waa hab ay shaqada isla dhexeeya nidaamsan Lugood iyo Music nidaamsan oo waxaan qaadi doonaa Lugood nadiif ah oo tusaale u ah. Raadi badhan Scan in madax iyo sax labada checkboxes. Barnaamijkan smart markaas bilaabi doonaan in ay ka heli kartaa macluumaad aad heesaha oo dhan, oo ay ku jiraan arts heestii.
3 dar tahay album in files music ah
Guji mid ka mid ah hees iyo aad u hubiso in ay tahay album waxaa ogaaday khaanadda saxda ah in curiyo doonaa. Haddii ay okay, riix badhanka Codso hoose. Waxa kale oo aad dooran kartaa dhowr heeso iyo codsan arts heestii mar. Ogsoonow in arts kuwa sidoo kale lagu soo bandhigi karaa on your iPhone, iPad tan iyo markii ay la socoto in files music ah.
Saar songs labalaabka: Haddii aad sax ku checkbox ee "Raadi labalaabka Songs" oo guji badhanka Scan, gabayadii labalaabka waxaa laga heli karaa. Markaas qashinka aad u guurto kartaa heeso la rabin.
Edit tahay album haddii aad rabto: Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inaad images badan oo artist ah oo loo isticmaali karo sida farshaxanka album heesaha kala duwan. Tani fududahay la TidyMyMusic. Muujinta song oo guji icon qalin khaanadda saxda ah. Waxaad jiidi karaan inaad sanam u beerta tahay album ka dibna badbaadin isbedelka.
Iska ilow maktabadda music kaliya walxood cirro iyo hello in qaab midabo. TidyMyMusic u Mac waa qiimo aad day.